I-Super Soft Fluffy efudumeleyo yeFlannel emhlophe-emhlophe i-HF29029 Bedspread, i-China Super Soft Fluffy eshushu yeFlannel ye-White-HF29029 Abavelisi bokusasaza abavelisi, abaXhasi, iFektri -Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
Inani Model: HF29029
IVERSATILE & IIMPENDULO EZININZI-Esi sigqubuthelo sebhedi silula, sineebhedi, esongeza inqaku elitsha, kwindawo yakho yokuhombisa. Ayityebanga kakhulu okanye icekeceke kakhulu, i-microfiber bedding ilula kodwa ifudumele ngokwaneleyo ukuba isetyenziselwe lonke ixesha lonyaka. Ukusetyenziswa okungafaniyo njengengubo yehlobo kunye nokufaka idyuvethi yasehlotyeni kufudumele kakhulu, ubushushu, ubusuku basehlotyeni. Isambatho esineebhedi senza ukuba ilungele ukulala kwaye uhleli esofeni uzisongele kwiinyanga ezibandayo zasebusika.
UMGANGATHO WEBANGA ELIPHAKAMILEYO